‘Mene Ɛkwan no ne Nokorɛ no ne Nkwa’ ( Yohane 14) | Yesu Asetena
KENKAN WƆ Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
YESU REKƆ AKƆSIESIE BAABI
ƆHYƐƐ N’AKYIDIFO BƆ SƐ ƆBOAFO BI BƐBA
AGYA NO YƐ KƐSE SEN YESU
Bere a Yesu ne asomafo no wiee nkae adidi no, ɔka kyerɛɛ wɔn wɔ abansoro dan no mu sɛ: “Mommma mo akoma nntu. Monnya Onyankopɔn mu gyidie, monnya me nso me mu gyidie.”—Yohane 13:36; 14:1.
Yesu kaa asomafo dubaako no koma too wɔn yam sɛ kɔ a ɔrebɛkɔ no, ɛnsɛ sɛ wɔma ɛhaw wɔn. Ɔkaa sɛ: “Tenabea pii wɔ m’Agya fie. . . . Sɛ mekɔ kɔsiesie baabi ma mo a, mɛba bio na magye mo aba me nkyɛn, na baabi a mewɔ no, mo nso moaba hɔ.” Nanso na asomafo no nnim sɛ ɔreka ne sorokɔ ho asɛm. Enti ɔsomafo Toma bisaa no sɛ: “Awurade, yɛnnim baabi a worekɔ. Ɛbɛyɛ dɛn na yɛahunu kwan no?”—Yohane 14:2-5.
Yesu buaa sɛ: “Mene ɛkwan no ne nokorɛ no ne nkwa.” Sɛ obi pɛ sɛ ɔkɔ Agya no nkyɛn wɔ soro a, gye sɛ ɔgye Yesu ne ne nkyerɛkyerɛ tom na ɔdi n’anammɔn akyi. Yesu kaa sɛ: “Obiara mma Agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so.”—Yohane 14:6.
Nkɔmmɔ no rekɔ so no, na Filipo atɛɛ n’aso retie, na ɔbisaa sɛ: “Awurade, kyerɛ yɛn Agya no, na ɛno ara dɔɔso ma yɛn.” Ebia na Filipo pɛ sɛ Yesu yi anisoadehu bi a ɛfiri Onyankopɔn hɔ kyerɛ no te sɛ nea Mose, Elia ne Yesaia hui no. Nanso nea na asomafo no wɔ no, na ɛkyɛn anisoadehu koraa. Yesu maa emu daa hɔ sɛ: “Berɛ tenten a me ne mo atena yi nyinaa wonnya nhunuu me, Filipo? Deɛ wahu me no ahunu Agya no nso.” Sɛnea Agya no suban te no, saa pɛpɛɛpɛ na Yesu nso suban te, enti sɛ obi ne Yesu bɔ na ɔhu sɛnea ɔte a, ɛte sɛ nea wahu Agya no. Nanso Agya no yɛ kɛse sen Ɔba no, efisɛ Yesu kaa sɛ: “Nsɛm a meka kyerɛ mo no, memmɔ me tirim na meka.” (Yohane 14:8-10) Asomafo no huu sɛ Yesu de ne nkyerɛkyerɛ ho anuonyam nyinaa maa n’Agya.
Ná Yesu ayɛ anwonwade akɛse ama n’asomafo no ahu. Ná waka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa nso ama wɔate. Afei deɛ ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Deɛ ɔnya me mu gyidie no, ɔno nso bɛyɛ nnwuma a meyɛ no bi; na ɔbɛyɛ nnwuma akɛseɛ asene yeinom.” (Yohane 14:12) Asɛm a Yesu kae no, na ɛnkyerɛ sɛ wɔbɛyɛ anwonwade akɛse akyɛn ne de no. Mmom, na ɔrepɛ akyerɛ sɛ wɔn som adwuma no, wɔbɛyɛ akyɛ asen no. Afei nso na wɔbɛka asɛm no akɔ akyiri na nnipa pii nso bɛte akyɛn ne de no.
Sɛ Yesu kɔ a, wɔn asɛm renyɛ mmɔbɔ, efisɛ ɔhyɛɛ wɔn bɔ sɛ: “Sɛ mobisa biribiara me din mu a, mɛyɛ.” Afei nso ɔkaa sɛ: “Mɛsrɛ Agya no na wama mo ɔboafoɔ foforɔ a ɔne mo bɛtena daa, nokorɛ honhom.” (Yohane 14:14, 16, 17) Enti ɔmaa wɔn awerɛhyem sɛ, sɛ ɔkɔ a, honhom kronkron bɛba wɔn so abɛyɛ ɔboafo foforo ama wɔn. Pentekoste da no na saa asɛm no baa mu.
Yesu kaa sɛ: “Aka berɛ tiaa bi na wiase nhu me bio, na mo deɛ, mobɛhu me, ɛfiri sɛ mete ase na mo nso mobɛtena ase.” (Yohane 14:19) Sɛ Yesu wu sɔre a, ɔbɛma n’asuafo no de wɔn ani kann ahu no. Afei sɛ daakye wɔwu a, ɔbɛnyane wɔn ayɛ wɔn honhom abɔde akɔka ne ho wɔ soro.
Yesu kaa nokwasɛm bi sɛ: “Deɛ ɔwɔ m’ahyɛdeɛ na ɔdi soɔ no, ɔno na ɔdɔ me. Na deɛ ɔdɔ me no m’Agya bɛdɔ no, na me nso mɛdɔ no na mayi me ho akyerɛ no pefee.” Yesu asɛm yi maa ɔsomafo Yuda a wɔsan frɛ no Tadeo no bisaa sɛ: “Awurade, ɛdeɛn na asi a enti wopɛ sɛ woyi wo ho adi kyerɛ yɛn pefee, na ɛnyɛ wiase no?” Yesu buaa sɛ: “Sɛ obi dɔ me a, ɔbɛdi m’asɛm so, na m’Agya bɛdɔ no . . . Deɛ ɔnnɔ me no, me nsɛm nso ɔnni so.” (Yohane 14:21-24) Ná Yesu akyidifo gye no tom sɛ ɔno ne ɛkwan no, nokorɛ no, ne nkwa, nanso wiase no deɛ, wɔanhu no saa.
Ná aka kakra ama Yesu asan akɔ soro, enti nea ɔkyerɛɛ n’asuafo no, na wɔbɛyɛ dɛn akae ne nyinaa? Yesu kyerɛɛ mu sɛ: “Ɔboafoɔ no, honhom kronkron no, a Agya no bɛsoma no me din mu no, ɔno na ɔbɛkyerɛ mo biribiara akaekae mo deɛ maka akyerɛ mo nyinaa.” Ná asomafo no nim sɛ honhom kronkron no wɔ tumi paa, enti saa asɛm no maa wɔn koma tɔɔ wɔn yam. Yesu toaa so sɛ: “Mede asomdwoeɛ gya mo, mede m’asomdwoeɛ ma mo. . . . Mommma mo akoma nntu na mommma no mmmɔ hu.” (Yohane 14:26, 27) Enti, na ɛnsɛ sɛ asuafo no ma ehu ka wɔn efisɛ Yesu Agya no ankasa bɛma wɔn akwankyerɛ ne ahobammɔ.
Ná ɛrenkyɛ, wɔbɛhu sɛ Onyankopɔn nsa wɔ Yesu so, efisɛ Yesu kaa sɛ: “Wiase sodifoɔ no reba. Na ɔnni tumi wɔ me so.” (Yohane 14:30) Yuda deɛ, Ɔbonsam nyaa kwan bɛhyɛɛ ne mu kɛntɛn ne so. Nanso na bɔne biara nni Yesu ho na Satan afa so atwetwe no afiri Onyankopɔn ho. Saa ara nso na sɛ Yesu wu a, Ɔbonsam nni tumi sɛ ɔbɛma no aka amena mu. Adɛn ntia? Yesu kaa sɛ: “Sɛdeɛ Agya no ahyɛ me sɛ menyɛ no, saa ara na mereyɛ.” Ná ɔnim sɛ ɛkwan biara so n’Agya bɛnyane no afiri awufo mu.—Yohane 14:31.
Ɛhe na na Yesu rekɔ? Bere a Yesu rekyerɛ Toma kwan a obi bɛfa so akɔ hɔ no, dɛn na ɔka kyerɛɛ no?
Dɛn na ɛbɛyɛ sɛ na Filipo pɛ sɛ Yesu yi kyerɛ no?
Bere a Yesu kaa sɛ asuafo no bɛtumi ayɛ nnwuma akɛse akyɛn no no, dɛn na na ɔrepɛ akyerɛ?
Adɛn nti na ɛyɛ anigyesɛm sɛ Agya no sõ sen Yesu?
Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Yɛbɔ Mpaeɛ wɔ Yesu Din Mu?
Sɛ yɛbɔ mpae wɔ Yesu din mu a, ɛhyɛ Onyankopɔn anuonyam na ɛkyerɛ sɛ yɛbu Yesu. Kenkan na wobɛhu pii aka ho.